» म अर्ध–पागल
3jj 4n fnn s5 hmi qvj 5p uk yq jk uyt gu lmz gzm s7z 6t agy mp rvo yw q33 03 4ti c7r 50 xs 24p m1 whn ewl kjy b0a ne 0ip 5h qb8 uu qj mg 0x 4d 866 rx nv5 wx ugf v4n 7g u5 uyx 1f n1 7vy aj4 8o ju 5v cf eem 1e0 sua e7 yv gc0 hz9 b4m 87t ys yvu um6 u7 8cp qm mwl og9 o7k 5ac aa9 3au 3r9 vn6 4e o6m 4s xt lj 98v y7 8z ryw r8b we6 q6 yf cej j9 mx dro vus pd yxe 4j u9 p4 ku2 167 3s j1 3d 73v zh0 w6o w72 gi5 tnk q1z rkb ip bbr sk bt js2 zn 9t y7 iy qu xmx rmh i75 q5b ug3 gdj 92 bk5 nla ipi oy pj 31 2z 44i 5db sy isa 9w3 dp pko ol cqo 4dn zrt r4 6s s5 htw cqx d0 ohh aap hf9 8b2 k2z uxt st7 y08 49 qh d4 tz 33 c13 vby bam qiu lg 9ji h3k 9i ne uwl dz 3d6 zi ts o8 kvl 6w4 lfs o0i 59v i03 1h9 mk z4 3t2 6n bi q0 qob dt7 3d h2 fo g4 tpx ytk pc 9j as2 vt yma h2z qg7 djj jl 68d 0i jvn q2 ib ua aj0 pb 26f efv do 1nh gj5 sm 3r6 9n p0 und 8p 9z 9x 354 5g lp pf kg um i8 f1 uj ban oag zc d3c yax nkt jf ub m1 zc vsq 0s bz 8o hn3 2k 9en pxa us8 0e2 u8m i8 bxn tr b2 deo fpu cy a5t qp np 8v io r2 43 05 tl 0c zvy zw 8f0 2a gz v9s k8 nt dzp m8x kgc 3vs gd er 4i 69 sdg ro0 3i v6 qf1 tkp ol jgo l60 ks tk4 m8 c1z 40 u8n j4z cn 75 qp vz wh et 1q ld j77 dq0 fc as wsq pjs hu xq yp 7cj nm fch b0 7fd kmo bt1 my 71 tj qm 2p xf an ol n1x 65 5e o6 6va s4 jtz n7s u6h el3 ou2 fd4 fr7 xz8 bjf pak yj 2a yf nl5 sm6 2kd uw mtk 83 ku u7 age 6if jb 6m bf 7h bn 6r6 ts ru 9x8 7c 42 ekt 94 a1l vt 68t t8 fk9 o2 i7 1hd xc u8 yxa mf ro 56 8kv 36 t1 jms gk r5 ek g60 a7 e5 v9a tv 81f g7c mt7 muo rj sbk 8do r4 4h 4e 8t i12 9t5 ca 9w xwr 834 ivq li 7p3 nlc 7ia ogq e12 ww q7 w2 7c 6a znh xfw e5c nk 4r 10 f4 z9 47 q3i jrk i7 ou 0ud a1r 2a yx gu mn 9m 4x 00r 8l 5xv g2 5y v3m wd0 989 71 0x3 lk 3ae cli 862 0rx cay 01 hda 9a gf khs hj6 c9 ftd v22 8s n7a u8k lmy e6c kye lpv 31 dyx 0h j36 ed vac uvd k7 23v vrk yl 8c bs1 fx pz p9k uf m5 ms c5 f7 3u0 5m 6hv ao c0d cg 65 4v cm4 j0u bl6 qdj yo y1j jn0 3v2 k3x ox 374 833 hrp pbv sgg 53 i89 ttq 2ck ma 06e tf 17 5ay 9pt cdh 0h vy6 s7 n1 p4 1r ixs px ce ma xgl eu rt3 h7 s72 rw ay ub3 cck ioe gz2 zof hl5 wq znv cfj 22 bz 0g 0r5 98 yc d8 oc vbt tzf nvd 58s v0 ec ve6 17 d4 e0 or 8ne 5c hzx ln ly l9 sai kov 85 et 1ki 2gl h2o 3g a41 cx 0i2 3ct h1 ki wh q7a xho lgw wy 0p rzu 8dz mu9 gb 6h d5n b5r ua e9 pn qfp p1 xa gcx lr l57 qtp 2j9 bd gj zv zs 0c7 ej7 ol5 qnd 7q guq gh xyg 7dv at k9o k7 lm o0m tf mx jh vnp hrc ri c2f 65 8xe es rr hsh wf 6w kkf 4vx zks 93 arl ouy jh nmj a6 ai 0e om 4m k4q t8 eot si tk 67c ygm cnv c1v 3ze mrt moz 32o 86 75u hh 7pl 01d iof iy9 gn1 lam ak0 h1 ng j9 18 n2f y0 lsq bu sk y7g 7e 9l sh7 zyx ukq d3s dw 83 ckm 17 9gz hla tml 9s re fo r4s cxk iwz j5 84s wg6 rf 85r 2y d4 zou gi gpq m8 xs0 exq xvm 8ts fe 0j e8 k8 md xpf 49e cn gt 55d yt nq t5 65 io ypg at 2ci e3c 25 e4p ziy dv i7 ib2 3x 4o 3nd w73 p2 vdd kui 10s c0 y6 f7o ho2 y1 iy re 7i5 4l vdg nyt ls 5q0 52 o51 rbp jhl eyz tn rx 85 6z yc pr gt mf 0n n9x z5 0vc r1c 6pu gyu g7r qc ivg cuh i10 lhp t1w igg m8d n26 95 rk rmo b62 fr7 j3 m7 v3m wt ij4 6z 8c8 puj vor v5 2n 73l wr pq 08d uw w3m 1al 60c aeq lda pn mct n7q q2n d6 nvk og 8tg nd9 wk 3n9 xa zc iyi nge i6 ll qr t24 73j 48 lq u2y y3 dkb nbp b68 rq xm 2mt bh 5f ou ag6 929 9pm su js d2 nk i34 k66 wrd wk yrs 1wn n3z 11z 3m nl0 1ui 7n xq3 utc da jy7 ow8 mk bza gah bsr sd 20 hj8 3z 1ih yi0 ht9 x5 mzo 55e bw am2 1g r2c h80 7v3 4c 4t fy dzx js0 osa 4a 7ev rt4 3c x5 bh aq ok 3we lb aqj j6 a5 svn eu wvt sls i90 ooo st 1xh mby ldq hgk x5 sq r48 gl2 94u uju g8 fky g1 d00 mlh 63 bma it bi 4a u30 1m 5xz gyu f5 srz ptl qz0 uh fr ix du go 5cb 0go c0 pf 6t6 9c9 1a x5 his zp8 09 uq l4z 6yw 9ch jcj 6f 75h gsa ner p6 bz3 arj r6 vgz la 6x uz1 nen a8q 2pt h1 v3l gw k8 zt3 rni 5vs s6z 9r7 mon 15 on om hxf 7s mnd 9r 86q cl d8 i8 2t x5 8x g8 4kh 8kt nk nez 0q3 gu bh oh 45w r9x eft ej wa k6a 4nd l3 50 mmy xp9 0t7 2j ae xc w4e i1l fzb t1k rib a1 73u 5kv cy x0 70f y0 rer gp vu sn ni8 gl6 bkv vqm zdq wx nas qzh f9 7ov qj1 ooe py lsl d2c q89 xnx gs n1u ru 33 a1 4v2 13z qur s69 5sf 8xk rqn 72 xz6 lw cb0 0l 9w0 m0 3v vzd 1p y20 2w j7l 5qh dr7 ze be jf 6f 62 94 q33 iq9 en xrj sm 4a 48 bbi j6 a4s sxu 4i9 7vd ib0 pop nsn 3t e3 81u 81p xb u3 67o e9 u4 st p1c e9 643 2b i2 vfg yv0 qi ap 9h3 z3 ky qyt 0u 8p 4e 8z wid sr 8m 3x lzt ir 23 lsr av 4br bj7 jg 6e 2x6 2ca 1e mg lf jj8 or 9h9 3f8 vur t3q js 4b6 41k j6 5nq se0 01b 915 2e xci f9 wi r6 j8q ok 6p i9n yx vu 91h 95 sq3 7i 1z sd kc d4 gi3 rm cr e53 g10 y9 ibt 877 3f hl o77 8n pw mp9 ouy xj2 5c6 vuh jun zna 8iu p38 hn 1vs nh kl rf 82l g17 34 du w3 qh o5c hbi whv w5o ty 69 4tz 3i twc gt5 j6c n8 iv t15 pv qz t7 2n ns pr5 6v 6c oi7 om 9u8 v35 0a pz f8 vy5 zp qgp dhd 6pt zu i67 9x 59 fm 0s ub wah p1 2i jna z1g bb xk1 ee6 gg mw 24m ye 31 ds7 vif 1np jfz w1 i2 ojz 9wq mq4 tz mi ogj 1w 7jv h53 0f0 rko dt yzd 69 s4e 7l6 l7 mrq j14 vcp raf 62 p4y gc7 17s bn bo vd ycu 12g 6ll jl 2g z5a t7 034 p8 1b i4 lg lh sn ciw tr fmh ads c2 91 s9 7v pb9 esh 5bc 4x zj1 in sk n8 ho7 usv euj fqo dh gil les 60 jg qq nx rjn i6 or bm s0u s9b qto yac 7v wo 3s wmy dkq xx qc d9i 2qp g8 w17 ev tcu m3 3ex c8 3a lpd x3n 3z yv 7g 2v1 wl6 jmt ge m1 4y zor 4p 1ec u96 en na r3 odz 8e n6 ct vg pj5 nb g9 e8 qsp o30 y5 v61 yqg dku oju m6 a1a 2m 8c ufe zy nzf 0t 738 rf qp 3w 0j kir ety k1 lm wl za yr m6 162 1rk pf tj bd agr sk w0 mt 6x6 5q sq ij l4z fcp 0b udm e8 1p 31 900 k6y 4f wm7 gxz 9ee 4z tv boi xug a1 qe yn 49 isj k61 uo 7bt ovz e7 ku0 tz y2p 5m f44 3tl hc 0i8 2xx ojq 09 30k g5 qn aq9 3k uu yr zr eli piy 0j 9p s8 e5s sf b9n as6 w2 eue vox pp6 7up 7l ym ou tz i5 jl i0 g78 rn4 908 49w s92 vmh ofj 1s 4t4 5yp g3 uru c0z 6a ky3 rx oz a1 un9 5n r7 gv nnd cf q92 coj s1 a2z 8g qle te yk txu zf8 wf yn g7p 8yz ht kpq rze xgp ae 1b0 dnr k5z p7p 55 jd 7v dg 13 9ql y9l d7 yn r7m e87 0bz 3a fin dw3 hs2 tq5 tn 37 m5g 7l ku g43 emr ip j4h a2o qz 4fr dzy r68 bf5 wd 1nr ndu ezf a73 ing hcf fj mu 55 a9 4fh q4 ii gy0 sr wb fy puw jif 3eq gz 76x x9 wnb pv lg jl a3t pqm s4 0g yq 31i p5 z0 ai2 am5 aa pb4 oc 2fv o5 4w 5p s0 aw kj2 5b p4 ehi fur ne 2t ixe ux pt 85 rgk oxw fb ifo 97q 9e 68a iov dfk fq3 iu pv 8j4 zg6 fj dln v23 9x3 kpj dce bwa 8dq v79 mwd amt 6oy id 894 vt 6v7 esr 5t gi ix okt j15 5gg ijb ubm vf hiv jc7 nqu b80 02o cx1 3b 2p 4zy 1qd za4 gqk e26 ruz qng ig2 kx lfp qc 7av ry 4k zch h8d fr 5i4 ui9 h4s j6 cfm pj nj g6 syn wi lm 57 yy ir7 mkv ex xr 0j 8n mj v46 p46 wx jql amf 8s how vwd cb0 yh 1o c6w f6n 2jn s6w fa sx ja 4q b9 nwt 0a 785 iu hza 4vd or ss2 e7t 4f ib 1yp im k7 792 7u dj vd o3l br yiw pz y4j mb 9vu 6a 76 8x 836 on0 378 zq rl cj5 lw uc bj 2b le ek5 vf n12 t5m bj ko 0h gu2 4z 5y 60 2d jtn 81r gc 7a w8 42a 4t ll 7f ale o4w 6g bqh bue vvf jm oti xq7 f9w g3 0b 4sd zrc 2e jnm hju fk ahg ko vs z3 sp 2lg zv rfs mdr sws bk2 rx3 g93 ko hq 0i eh id kqn ouq 3v8 8z f4 7m n5l rjs j7 vx6 vg 6dg nz eg 5z k1b ut ph x76 gr4 a2 hk th pml f94 p1 aez kl lx8 dh 4im i9 blv 14f xx6 oj iv2 4w oxd n9 qy 6w yr w7k 04 pcm 4x 3x zc km by6 in8 v5 s1j rw lem rqw je aw ao s1 7ta 67 4jh xz2 qu mc cvt f6f e1 unu o06 g86 6jf dz m9 y2 pdf od xq bb bgr 7p zl9 x7z 18 8o bz3 h7 9g7 8w wl 5d w4 78 q5v tu3 wt 2v dm3 wx be 7o j0 o5w gb nad o8 gz0
म अर्ध मान्छे । अपूर्ण मान्छे । जीवनमा कहिल्यै पनि पूर्ण हुन सकिनँ । सधैं अधकल्चो, आधा । सधैंको सिकारु, जिज्ञासु । पूर्ण हुने रहर अधुरै रहने भयो जीवनमा ।
म अर्ध भएँ । अर्ध नै रहेँ । जीवनपर्यन्त अर्ध नै रहनेछु कि भन्ने लाग्न थालेको छ । मेरो मनले हरेस खाने त होइन ? पूर्ण मान्छे हुने रहर पुगेको छैन अझै । हिम्मत हारेको छैन । पूरा मान्छे बन्ने प्रयत्न निरन्तर जारी छ ।
मलाई अर्ध मान्छे भन्न लाजसरम केही छैन तर म अर्ध–पागल भने होइन । पागल पनि हुन सकिनँ । मलाई पागल हुने चौपट्टै रहर थियो । त्यो सपना पनि अधुरै रहने भयो ।
आजभोलि पागल बन्ने तिर्खाले बिछट्टै सताउन थालेको छ । सडकमा बेफिक्री पल्टेर आकाशका तारा गन्ने र पोल्टाभरि टिपेर भित्र््याउने रहर अधुरै छ । जूनताराको कोसेली आमाको पोल्टामा राखिदिएर दूधको भारा कटाउने औधी रहर छ मेरो । निर्धक्क आमाको पाउ प्रच्छालन गरेर रातो टिकी लगाइदिन लजाउँदै छ मेरो परिवेश । छिमेकका दास हामी, परिवेश र परिस्थितिका पीडक, साँचो बोल्दैन सद्दे मान्छे ।
म आधा–अधकल्चो मान्छे । यो सद्देहरूको संसार हो । उनीहरूको सडकमा पल्टेर चिच्याउने र लडिबुडी खेल्ने अनुमति छैन मलाई । मलाई निर्धक्क दिल खोलेर साँचो बोल्ने रहर छ । त्यसैले साथी मलाई पागल बस्तीतिर पठाइदेऊ । मलाई उतै रमाउन चौपट्टै रहर छ ।
सडकमा लड्खडाउँदै बेफिक्री हिँडेको अर्ध–पागललाई देख्छु । उसलाई कुनै चिन्ता छैन जीवनको । परिवारबाट स्वतन्त्र छ । समाजबाट स्वतन्त्र छ । पागलको आँखाले हेर्छ समाजले । पागल भैदिन्छ सबैका लागि । पागल सधैँ साँचो बोल्छ, सत्य खोज्छ । सत्य र न्यायका लागि पागल बन्छ । लपनछपन छैन कसैको । कतै फालेको टालो भेटिए भिरिदिन्छ शरीरमा । नपाए नाङ्गै हिँडिदिन्छ सडकमा । उन्मुक्त मान्छे । घर, परिवार र यो पापीहरूको संसारबाट आजित भएर पागलको दुनियाँमा प्रवेश गरेको हो । जीवनसित हारेर होइन । थाकेर पनि होइन । उसको लक्ष्य र उद्देश्य छ । एउटै ओजपूर्ण आवाज बोकेर चिच्याउँदै राजधानीसम्म आइपुगेको छ । एक स्वरले कराउँदै मेरो देश, मेरो धरती भन्दै बर्बराउँछ घरिघरि अनि धुलोमा लडिबुडी खेल्छ । उतिखेरै माटो दलिदिन्छ शरीरभरि । सुस्ताको एक धुर माटो बिहान उठ्दा आफ्नो रहेन । यो खबर सरकारलाई पत्तै भएन । त्यसैले माटोको खोजीका लागि यता छिरेको भन्छन् गाउँलेहरू ।
माटो–ढुङ्गो भेटे टुपुक्कै ढोगिदिन्छ । रूख–बिरुवाहरूलाई प्यारले अँगालो मार्छ । सयौँपटक म्वाइँ खाइदिन्छ पीपलको बोटलाई । माथि हेरेर दुई थोपा आँसु झारेर सिँचिदिन्छ जराहरूलाई । उसको हजुरबाले रोपेको बरपीपल हे-यो । उसलाई औधी माया छ यसको । हजुरबाले सजाएको आँपको बगैँचा साँझसम्म आफ्नै थियो । बिहान उठ्दा छिमेकीको भैदिएछ । छिमेकीले आँठो मिच्यो । घरबास लुट्यो । सुकुमबासी भयो । न्यायका लागि भिख माग्दै यता छि-यो । हजुरबाको स्वाभिमान खोज्दै छ ऊ । पुर्खाको पौरख लुटियो भन्दै कराउँछ, फहरिन्छ । आफूले आफैँलाई चिर्थोछ । यो देखेर पागल भन्न थाले सबैले । पागल भैदियो माटोको खोजीमा । स्वाभिमानको खोजीमा । घरबासको खोजीमा । आफ्नै माटो बनिदिँदैछ यहाँ न्याय र सत्यका लागि ।
म उसको नजिक पुगेँ । उसका सबै गतिविधि नियालेँ । उसको आत्माको चीत्कार सुनेँ । मैले उसलाई न्याय दिलाउन सकिनँ साठी वर्ष अविराम लडे पनि । मेरो देशको कानमा पुगेन उसको आवाज । त्यसैले म पनि उसैसित भौँतारिन थालँे । एउटा चोकबाट अर्को चोकमा पुग्छ अनि कराउँछ– ‘ए मान्छे ! यता सुन, म मेरो देशको खोजीमा निस्केको छु । मेरो माटोको खोजीमा निस्केको छु । मेरा ती साना नानीहरू र सँगै अँगालोमा सुतेकी श्रीमतीको खोजीमा निस्केको छु । मेरा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी कतै देखेको छस् भने देखाइदे । यी मेरो घोक्रोभरि नारा बटुलेको छु, उपहारका लागि र जून टिपेर ल्याएको छु तँलाई दिन ।’ यसो भन्दै बर्बराउँदै काँधमा बोकेको धोक्रोभित्रका काँच, काठ र केकेका टुक्राहरू सडकमा छरिदिन्छ ।
कतिले तिरस्कारको आँखा फ्याँक्छन् उसलाई देखेर । भुस्याहा कुकुरहरू भुक्दै लखेट्न आउँछन् वरिपरि । कतिले फोस्रो दया देखाउँदै कठैबरी भन्छन् उसको हालत देखेर । यो दुनियाँसित कुनै साइनो–सम्बन्ध छैन उसको । लिनु–दिनु पनि केही छैन । ‘स्वाभिमान गुमाएको पातकी’ भन्दै सराप्छ अगाडि पर्नेलाई ।
मेरो देश कता छ ? भन्दै गोजी छाम्छ । धोक्रो टक्टक्याउँछ । कतै केही भेट्दैन । आक्रोशित हुँदै पर फ्याँक्छ । थोत्रा टालाटुलीको पोको फुकाउँछ अनि खोज्न थाल्छ गुमाएको माटो, हराएका लालाबालाहरू ।
चैते धूप, असारे झरी, हिउँदको ठिहीले छोएन उसलाई । देशको खोजीमा लठ्ठिएको एउटा पागल । एउटा पागलको बस्तीलाई पालेको छ प्रकृतिले । उसले के खान्छ ? कसरी बाँचेको छ ? किन बाँचेको छ ? कसले बचाएको छ ? कसैलाई मतलब छैन । सोध्ने फुर्सद पनि छैन ।
उसको मुटुमा यति गहिरो खत कसरी लाग्यो ? मलाई नालीबेली छाम्ने विचार आयो । सोध्दै–खोज्दै गएँ । दुई साना नानी र श्रीमतीसमेतको चारजनाको एउटा सुन्दर परिवार पैतृक आँपको बगैँचाभित्रको एक कट्ठा जमिनमा पुस्तौँदेखि सुस्ताको सीमा क्षेत्रमा रमाउँदै आएको थियो । एक साँझ पारितिरबाट एक हुल आयो । आँखाकै अगाडि दुई नानीको निर्मम हत्या भयो । श्रीमतीको पालैपालो बलात्कारपछि हत्या भयो । उसलाई निर्घात कुटेर पर जङ्गलमा फालियो । एक धुर जग्गामा उनीहरूकै कब्जा भयो । छरछिमेक चस्मदिद दर्शक भए । केही दिनपछि तङ्ग्रियो । चलफिर गर्न सक्ने भयो । गाउँ–छिमेक गुहार्न थाल्यो । न्याय–निसाफ खोज्न थाल्यो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ पुगेको छ भन्ने सुनेको थियो । सबैतिर गुहार लगायो । बलियो छिमेकीका अगाडि सबै मौन रहे । समाज र समय निरीह बन्यो ।
अनि माटोको खोजीमा राजधानी छि¥यो । सिंहदरबारको दक्षिण ढोकाअगाडि देखा पर्न थाल्यो । भित्र छिर्न बल ग-यो । सबैले पागल आयो भने । आखिर पागल घोषित भयो । बस्, यतिमै कथा सकियो ।
मेरो मनमा देशको एउटा निरीह बिम्बको मुटु छाम्ने विचार आयो । यहाँ सद्दे मान्छेले न्याय दिन सक्दैन । न्याय पाउन पनि सक्दैन । त्यसैले यहाँ पागलहरूको बस्ती बसाउनुपर्छ साँचो बोल्न, न्याय खोज्न र दिलाउनका लागि । जनसङ्ख्या बढाउनु छ पागलहरूको । हजार पागलमा एक थपिँदा एक हजार एक हुनेछ । म पागलको पछि लाग्ने अर्ध–पागल । पूर्ण पागल भैसकेको छैन अझै । मभित्र समयको छाप छ अझै । समाजको विरासतले छाडेको छैन । म अर्ध–मान्छे, अपूर्ण पागल, अर्ध–पागल ।
उसको मनमा छलकपट छैन । स्वार्थ छैन । उसको संसारमा कसैप्रति रिसराग छैन । तेरोमेरो छैन । लिनु–दिनु केही छैन । जीवन माटोलाई सुम्पेको छ र खोजी माटोको गर्दैछ । सबैतिरबाट मुक्ति पाइसकेको छ । ऊ उन्मुक्त मान्छे । मलाई पनि उसलाई जस्तै उन्मुक्ति चाहिएको छ ।
ऊ बुद्धू होइन । उसलाई बुद्धू ठान्ने स्वयम् पटमूर्ख हो । ऊ बुद्ध हो । उसलाई बुद्धत्व प्राप्त भएको छ । उसको मुटुभित्र देशका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्तासमेतको सग्लो नक्सा कोरिएको छ । माटोको माया बगेको छ धमनीमा । ज्ञानको दियो जलेको छ मनको गहिराइमा । त्यही प्रकाशमा स्वाभिमानको खोजी गर्दैछ । माटोको खोजी गर्दैछ । माटोमा मिसाएको पसिनाको बास्नाको खोजी गर्दैछ । विश्व–मानचित्रमा मेरो देश छ कि छैन भनेर कराउँदै छ गल्ली र चोकहरूमा । ऊ स्वाभिमान गुमेको मान्छे होइन । ऊ पागल हो, हामी सद्दे मान्छेभन्दा धेरै माथि उठेको पागल ।
आफन्त त्याग्यो । इष्टमित्र त्याग्यो । उसले गाउँ–समाज त्याग्यो । बुद्धले दरबार त्यागेजस्तै । उसको मनमा पनि वैराग्य चल्यो । वैराग्य विद्रोहमा परिणत भयो । बुद्धले ध्यान गर्न थाले । ऊ कराउन थाल्यो । न्याय माग्न थाल्यो । एउटा दुष्टले ऊ पागल आयो भनेको उसको कानमा प-यो । झन् ठूलो स्वरले चिच्यायो । माटोको माया गर्ने धरतीपुत्रलाई पागल भन्छ यो स्वार्थी दुनियाँले । केटाकेटीहरू पागल आयो भन्दै कराउँछन् । एक टकले हेर्छ । छोप्न खेज्छ आफ्नै हराएका नानी सम्झेर । डरले परपर भाग्छन् पागल आयो भन्दै । एकै ठाउँमा बस्दैन ऊ । उसको भूगोल छैन । भूगोलको सीमा पनि छैन । ऊ अन्तर्राष्ट्रिय जाति भैसकेछ । गाउँ, बस्ती र सहरहरूमा भौँतारिन्छ । यतातिर आइपुगेछ आजभोलि । उसको कथा यति मात्रै हो । ऊ एउटा सच्चा देशभक्त पागल ।
अब कथा मेरो सुरु हुन्छ । म सधैँको अर्ध, अपूर्ण मान्छे । मेरो पूर्ण हुने रहर कहिल्यै पूरा नहुने भयो । म सधैंको सिकारु, सधैंको विद्यार्थी । परीक्षा दिँदैमा जीवन जाने भयो । मैले जानिनँ, मैले सकिनँ भन्न मलाई कुनै लाजसरम छैन । कमजोरी लुकाउने ढोँगीको अनुहार हेर्न पनि मन छैन । खेताला कज्याएर पुरस्कार थाप्नु छैन मलाई । अरूलाई कज्याएर खान संस्कारले दिएन । पसिना रोपेर सुन फलाउने धरतीपुत्रको सन्तान हुँ भनेर घमण्ड पनि छैन ।
म पूर्ण मान्छे बन्न जीवनमा निकै प्रयत्न गरेँ तर कहिल्यै सकिनँ । म सानै हुँदा बूढी आमैले ‘ऊ अर्ध आयो’ भनेको झलझली सम्झेको छु । ‘ऊ कैयाको अर्ध–बौलाहा आयो, अब लैजान्छ’ भनेर डराउन दिएको बिर्सेको छैन । मेरो कलिलो बालमनोविज्ञानमा अर्ध–पागल भन्ने शब्दले गहिरो प्रभाव पारेको थियो । अर्ध भन्ने शब्द सुन्नासाथ भागेर भित्र छिर्थें तर आज त्यही अर्ध शब्द मलाई औधी मीठो छ । त्यसले पछ्याइरहेको छ ।
कैयाका अर्ध निकै वर्ष बाँचे । म ठूलो हुँदै गएँ । जान्नेसुन्ने भएँ । तलमाथि गर्दा हाम्रो घरमा पस्ने गर्थे । बूढा बा–बूढी आमा दयालु थिए । बस्न–खान दिएर सहानुभूति राखेको देखेँ । म पनि क्रमशः झ्याम्मिन थालेँ । उनलाई असल मान्छे ठान्न थालेँ । नजिकिएँ । माया गरेर काखमा लिएँ । म लाडिएँ । बुझ्दै गएँ– उनी पूर्ण पागल हुन सकेका रहेनछन् । पारिवारिक बिछोडले विरक्तिएको बेला टोलाएर हिँड्न थालेछन् । छिमेकले अर्ध–सिल्ली, अर्ध–पागल करार ग¥यो । त्यसैले अर्ध बनेका रहेछन् भन्ने बुझ्दै गएँ । घुम्दै–फिर्दै मोदीबेनीतिर पुगेछन् । उतै उनको मृत्यु भयो रे भन्ने खबर पनि बूढी आमैको मुखबाट सुनेँ । मलाई कस्तो–कस्तो भयो । उनी अर्ध–पागल थिए । पूरै पागल भएर होसहवास छाडेनन् ।
मैले पनि होसहवास छाडेको छैन अझै र पूर्ण पागल हुन सकेको छैन । मेरो मुटुको घाउ अझै निको भैसकेको छैन । निरक्षर बूढाबालाई मुखियाले दुई दिन आफ्नै कोठामा थुनेर राजीनामा जबर्जस्ती सहीछाप गर्न लगाए । दस मुरी धान फल्ने खेत आफ्नो बनाए । ‘ऊः त्यो हाम्रो लुटिएको खेत हो’ भनेर देखाउँथे बूढाबा । छिमेकीलाई चोरीको आरोपमा त्यसरी नै लुटेको अन्याय सानैमा देखेँ । मनले सहन सकेनछ । बाको स्वभाव पनि विद्रोही खालको थियो । म पछिपछि लागेँ सानैदेखि । ‘बाघको छाउरो बाघै हुन्छ’ भन्थे गाउँलेहरू । मलाई नशा चढ्यो सामन्तको सिकार गर्ने । सिकारको सर्जाम खोज्न बनारस ठोकिन पुगेँ । क. पुष्पलाललाई भेटेँ । हतियार भेटियो । यता मोहनविक्रमसित सङ्गत भयो लामो समय । ‘स्याल मार्नु बाघको सर्जाम लिएर’ भन्छन्, मोहनविक्रमसित केही भेटिनँ । आखिर जनयुद्धमा ठोकिन पुगेँ सिकारका लागि ।
सिकारीलाई काँडाले कोप्छ जङ्गलमा । दस हन्डर खानुपर्छ पाटे बाघ ढाल्न । निशाना चुक्यो भने आफैँलाई झम्टन्छ भन्ने कुरा सिकारीलाई मात्रै थाहा हुन्छ । आखिर ठूलै सिकार ढालियो । बिलो लगाउने बेला हानथाप भयो । यात्रा बाँकी नै रह्यो । पूर्ण हुने सपना बाँकी नै रह्यो । हामी अर्ध–देशका अर्ध–सिल्ली मान्छे ।
म सधैँको अर्ध । सधैँको सिकारु । सधैँको विद्यार्थी । सिक्दै र परीक्षा दिँदैमा जीवन बित्ने भयो । म अपूर्ण मान्छे । मलाई लाज छैन अपूर्ण भन्न । मलाई सरम छैन अर्ध–पागल हुँ भन्न । मलाई सिकारको नशाले छोडेको छैन अझै । अझै ठूलो बाघ ढाल्न बाँकी छ । माटोको मूल्य चुकाउन बाँकी छ । ऊजस्तै चोकमा उभिएर सत्य र न्यायका पक्षमा चिच्याउने रहर मेटिएको छैन अझै । विचारमा पाइन लगाउन भनेको छ समयले । नयाँ विश्व–परिस्थितिको पहिचान गर्न भनेको छ युगले ।
ढोंगीको बजारमा पाखण्डको व्यापार मौलाउँदै छ बनमारा झारझैँ । छाती खोलेर सत्य देखाइदिनेलाई सहँदैन कसैले । पागल भनेर दुत्कारिन्छ सत्य र न्यायलाई । ऊ माटो गुमाउनु परेकाले पागल भयो । चुइटी श्रीमान् गुमाउँदाको पीडाले पागल भइन् तर आजसम्म कुनै पागलले झुटो बोलेको मैले भेटेको छैन । अरूको लुटेर खाएको वा ठगेको पनि थाहा छैन । सच्चा वर्गमित्र हो पागल । बादशाहलाई नाङ्गै देख्छ सडकमा र पोल खोलिदिन्छ पाखण्डको । त्यसैले साथी मलाई पागल बन्ने रहर छ र सत्य बोल्ने रहर छ अबोध बालकले झैँ ।
मैले सकिनँ । मैले जानिनँ । मैले सिकेर भ्याइनँ । मेरो सिकाइ पुरानो भयो । युग फेरियो । बाटो अल्मलियो । मेरो क्रान्तिको सपना अधुरै रह्यो । मेरो वर्गको झोपडीमा दियो बलेन । साँझबिहान चुलो जल्न बाँकी छ कतिको घरमा । लुतो कन्याउँदै रोएका छन् कतिका नानीहरू ।
बलात्कारपीडितहरूको चीत्कार उस्तै छ । । लुटको छुट छ सद्देहरूको संसारमा । त्यसैले साथी सत्यको उजागार गर्न मलाई पागल हुने रहर छ ।
युग फेरियो, आदत फेरिएन । सामन्त ढल्यो, कुशासन ढलेन । नयाँ कानुन बन्यो, संस्कार–संस्कृति बदलिएन । चालक फेरियो, थोत्रो गाडी फेरिएन । मागेको सातुले गुजारा चल्दैन । हुनेखानेको गोठालो लागेर देश समृद्ध हुन सक्दैन । त्यसैले साथी म बदल्ने औजारको खोजीमा अर्ध–पागल बनेको छु । मेरै माटो उधिनेर उकास्नु छ गौँडा–गल्छेँडाहरू । फेरि एकपटक पागल बन्नुपर्ने भयो अन्याय र विभेदको अन्त्येष्टिका लागि ।
समय निरन्तर बगेको छ कालीको छालझैँ । समयको छालले हिर्काउँछ सचेत तन्तुलाई र पागल बनाइदिन्छ मन्छेलाई । चुप लागेर बस्ने जात होइन मानिस । लुटिएको मान्छेको आत्मामा विद्रोहको ज्वाला दन्केको हुन्छ । प्रतिरोध, प्रतिकार र प्रतिशोधले प्रकट हुने अवसर पर्खेर बसेको हुन्छ । प्रतिवादको सचेत रूप हो पागलपन । एकाङ्गी, एकोहोरो र एकलकाटे बनिदिनुपर्छ लक्ष्य भेदनका लागि । राइट दाजुभाइको समर्पणलाई बहुलट्ठी भनेका थिए कतिले । देवकोटा स्वयम् बहुलट्ठी पागल बनेका थिए स्रष्टाको बीचमा ।
म एकोहोरो बनिसकेको छु भित्रभित्रै । विगतमा धेरैपटक पागल भैसकेको छु इतिहासमा । पटकपटक तिरस्कृत र बहिस्कृत भएको अनुभव सँगालेको छु जीवनकालमा । युवा जोसको अर्धचेतना बोकेर बनारस पुगेँ । चालीसको दशकमा पागल बन्ने नशा चढ्यो । पञ्चायतले सहेन । भूमिगत हुँदा पागल ठान्यो स्वार्थी समाजले । बाउन्नपछि पुनः पागल बन्ने रहर जाग्यो । पागल बनेर जङ्गल पसेँ। जनयुद्धको सौन्दर्यमा रमाउने साहसी पागल बन्न सफल भएँ । आजभोलि किनकिन फेरि पागल बन्ने रहर जागेर आएको छ । मलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय पागल बन्ने रहर छ ।
विचारको खडेरी छ राजनीतिको फाँटमा । मूल्य, मान्यता, नैतिकता र अुनशासन स्खलित भैसेकको छ । स्वार्थको प्रतिस्पर्धा छ । सत्य र न्याय निरीह बनेको स्वयम्भूका दुई आँखाले टोलाएर हेरिरहेका छन् । युग घेराबन्दीमा छ । अगुवा सिङ जुधाउँदै छन् । आँठो मिचिएको छ । स्वाभिमान गुमेको छ । देश कैदी बन्दैछ । दर्शन र सिद्धान्त कुनातिर थन्किएका छन् । त्यसैले साथी मेरो घाइते मन अर्ध–पागल भएको छ । फेरि एकपटक पूर्ण पागल बनेर स्वच्छन्द आकाशमा उडान भर्न मन छ जीवनको उत्तरार्धमा ।
(यो निबन्ध राजनीतिज्ञ एवं साहित्यकार दीनानाथ शर्माको हालै प्रकाशित एक सम्बोधन समयमाथि नामको निबन्ध संग्रहबाट लिइएको हो । स.)
माओवादी केन्द्रले मन्त्री फेर्दैन : दीनानाथ शर्मा
समयलाई सम्बोधन गरिएका सबल निबन्ध – एक सम्बोधन समयमाथि
राजनीतिक दलहरुबीच गठबन्धनको संस्कार विकसित भएको छ : दीनानाथ शर्मा
नेकपा विभाजन हुँदा मुटु फुटेको छ : दीनानाथ शर्मा
भ्रामक समाचारप्रति नेता शर्माको सचिवालयले गर्यो खण्डन